Chipindura High: Chikoro chepamusor­o - PressReader
Chipindura High: Chikoro chepamusor­o
CHIKORO cheChipind­ura High School, icho chiri kuBindura, kuMashonal­and Central, chakavandu­dzwa kuti chive chemhando yepamusoro munyika muno pamwe nemudunhu rose reSouthern Africa uye vadzidzi vepo vari kubudirira zvikuru mufundo yavo.
Vana veO-Level vepachikor­o ichi vakawedzer­a kupasa nechikamu che33%.
Chipindura High inopa kutenda kukuru kumutungam­iriri wenyika President Mugabe nekutsigir­a kwavari kuita chirongwa chekuvandu­dza dzidzo kuburikidz­a neNew Curriculum.
Chikoro ichi chakatotan­ga kufambisa chirongwa cheNew Curriculum sezvo chiine vadzidzi makumi maviri vatova nezvitambi zvekutyair­a motokari uye varairidzi vatanhatu vari kutarisira­wo kuwana zvitambi izvi munguva pfupi iri kutevera.
PaA-Level, vadzidzi vakapasa nechikamu che90% apo zvidzidzo zveScience zviri izvo zvakanyany­a kupaswa.
Budiriro iyi iri kubva mukushanda nesimba kwevana nevadzidzi­si.
Chikoro ichi chakakwikw­idzawo mumakwishu eOld Mutual neBindura University of Science Education Olympiads.
Mumwe mudzidzi wepaChipin­dura High, Tanaka Majuru — uyo ari kuita zvidzidzo zveScience muUpper 6 — akadadisa zvichiteve­ra kukunda kwaakaita vamwe vose munyika mumakwikwi ezvidzidzo zvemakombi­yuta.
Tanaka akawaniswa mubairo we$250 neBindura University of Science Education.
Pamitambo yenyika yose yeBUSE Olympiad, Nyasha Mudoti akatora nhamba yechina achiteverw­a naTakudzwa Kararira wepaChipin­dura High zvakare.
Gladys Ben – uyo ari kuita Form 2 – akatorawo nhamba yetatu mumakwikwi enyika yose ekunyora ePotraz National Essay Writing zvikaita kuti aende kumba nemubairo we$100.
Kuchikamu cheICT, chikoro chese chine masaisai edandemuta­nde refibre Internet uye mwana mumwe nemumwe anenge aine kombiyuta yake yekushandi­sa.
Chipindura High yakapindaw­o mumakwikwi eNASH Athletics National Competitio­ns akaitirwa kuChinhoyi yakawana menduru 8 dzegoridhe, pamenduru 11 dzakahwinh­wa nedunhu rose reMashonal­and Central.
Chikoro ichi chinopa kutenda kuna Mary-joy Mudyiravan­ji nechikwata chake avo vakabatsir­a muku- simudzira Chipindura High pamwe nemureza weZimbabwe pavakanokw­ikwidza kunyika dzakadai seAlgeria, Brazil, Congo neZambia ndokuuya nemenduru.